सपना नदेखेको बाटोमा धुर्मुसको यात्रा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
धुर्मुसको कलाकारीता पाटो र समाजिक अभियानको बाटो
उमेरले ३३ पुगेका धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) श्रीमति सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे)लाई लिएर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक हुँदै यतिबेला तराई झरेका छन् । महोत्तरीको मुहसर बस्ती निर्माणमा उनी खटिरहेका छन् । पुनर्निर्माणमा नागरिकका तर्फबाट उदाहरणीय काम गरेको यो जोडीको अहिले सर्वत्र प्रशंसा छ । ब्यस्थता पनि उसैगरि बढेको छ । ‘धुर्मुस सुन्तली’ फाण्डेनसको कार्यालयमा करिव आधाघण्टामा गरिएको अधुरो कुराकानीपछि नेपालपाटीका लागि सहकर्मि बबिता ढकालले उनको कलाकारीता पाटो र समाजिक अभियानको बाटो केलाउने प्रयास गरेकी छन् ।
‘खै कहाँबाट सुरु गरौं’ ? लामो श्वास लिँदै उनले भने मन धेरै दुखेको थियो । पेशा नै अनौठो सबैलाई हसाउनुपर्ने । मन रोइरहेको छ हसाऊ कसरी ? भूकम्पपछिको दिनलाई सम्झदै बिहीबार साँझ पुरानो बानेश्वरमा रहेको ‘धुर्मुस सुन्तली’ फाउण्डेशनको कार्यालयमा उनले गफको सुरुवात गरे । समयले साँझको निम्तो दिइरहेको थियो उनको कार्यतालीकाको चाप पनि थपिदै थियो । हास्य ब्यङ्ग्यको कालाकारीसँगै थपिएको सामाजिक जिम्मेवारीले उनको दैनिकी निकै व्यस्त बनाएको छ । समय पाउन भेट्न समेत हम्मे हम्मे । ‘आजसम्म मैले जे गरेँ, समय परिस्थिति अनुसार गरेँ । ‘आजसम्म कुनै काम पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार गरिएन । न त म कलाकारितामा जम्छु भनेर लागेको थिएँ, न समाजसेवाको सपना नै पालेको थिएँ । तर म दुबै क्षेत्रमा आएँ ।’ केही विगत, केही वर्तमान धेरै चै भविश्य : उनको बोलीले यस्तै बताइरहेको थियो ।
यसरी सुरु भयो समाजिक सेवा तर्फको यात्रा
भूकम्पले देश हल्लिरहेका बेला धुर्मुस र उनको परिवार पनि थामिएको थिएन । हातमुख जोर्ने उपाय थियो हास्य विधा । तर भूकम्पको पीडाले थलापरेकाहरुलाई खै कसरि हसाउने ? दोधारमा परे धुर्मुस । मनमा एक किसिमको आँधीहुरी मड्डारियो । मनले भन्यो हसाएर पनि त पीडामा मलहम लगाउने काम हुन्छ त्यति बेलाको प्रशंग कोट्याउँदै उनले भने ‘मैले जे सक्छु त्यहीबाट राहत दिन्छु । अरुलाई राहत नमिले पनि अरुलाई सन्तुष्टि त मिल्छ ।’ परिवर्तन गरौं भन्ने होईन परिवर्तन त आफैबाट पो थाल्नु पर्छ अहिले पनि उनी प्रष्ट छन् । भूकम्पपछिको पहिलो समाजिक अभियानमा धुर्मस काभ्रेको डाँडा गाउँ पहरी पुगे, ।
जब त्यहाँ पुगे त्यो भयावह स्थिती देखेपछि उनको मन थामिएन । नत हसाउन सके नत रुन सके । उनले एकीकृत नयाँवस्ति निर्माणको पहिलो काम त्यही काभ्रेको डाडा गाउँबाटै थालेका थिए । तर काभ्रेको डाँडागाउँमा वस्ति निर्माण गर्दाको समयमा त्यती चर्चामा पनि आएन । उनले थपे ‘हुन त मैले चर्चाका लागि गरेको पनि होइन ।’ धुर्मुस सुन्तली फाण्डेसनले काभ्रेको डाँडागाउँमा २० परिवारका लागि घर बनाएका थिए, त्यसको कुल लागत ६७ लाख ५० हजार थियो ।
डाँडाँगाउँमा वस्ति निर्माणले सामान्य सन्तुष्टि त दियो तर मन भने अघाएको थिएन । भूकम्प गएको झण्डै एक वर्ष पछि सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर पुगेको थिए । जुनवेला म त्यहाँ पुगेको थिए त्यसवेला सम्म पनि भूकम्प गएको अहिले जस्तै थियो । ‘एउटा ढलेको मुढो उठाएर पन्छाउने कुनै हात अघिसरेका छैनन्, बृद्ध नागरिकको संख्या धेरै छ । सबै चिहान घाटको मलामी जस्ता ।’ अहिले पनि त्यो दृश्य उनको आँखाबाट ओझेल परेको छैन ।
धुमर्ससले सुन्तलीको साथ लिएर अठोट गरे अव यहाँको बुढाआमाको छोरा म बन्नु पर्छ भाई बहिनिको दाई बन्नु पर्छ अनि साना नानीको अभिभावक बन्नुपर्छ । त्यसपछि मैले ०७३ बैशाख १२ गते बाट नै उनले बस्ति निर्माणको काम सुरु गरेका थिए । सहयोगी हात र धुर्मुसको आटले गर्लमै ढलेर तामाङ बस्ति ६ महिनामा नै नयाँ स्वरुपमा उठ्यो । गिरानचौरमा ६५ वटा घर एउटा सामुदायीक भवन , एउटा खेल मैदान, ७ वटा पार्क, सार्वजनिक धारा, शौचालय निर्माण नयाँ स्वरुपमा बनेका छन् । जसको लागत ५ करोड १४ लाख रुपैंया थियो । उठेको ६ करोड ७ लाख खर्च भयो ५ करोड १४ लाख । बाँकी पैसाले के गर्ने ? धुर्मुस सुन्तलीको टोली अहिले त्यही पैसाको जग्गा उठ्दै नउठी ढलेको बस्ति महोत्तरीको मुसहर बस्तिमा पुगेको छ ।
गिरानचौर पछि महोत्तरी किन ?
हुनत त ‘धुर्मुस सुन्तली’ले गिरानचौरपछि भूकम्पले लडेका अरु बस्ति उठाउने योजना नबनाएका होइनन । तर गिरानचौर पुग्नु अगाडी नै उनी कामकै सिलसिलामा मुसहर बस्ति पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपछि देखेको अवस्थामा भूकम्पले ढलेको बस्तिभन्दा पनि ददर्नाक थियो । महोत्तरी पुग्नुमा धुर्मुसको अर्को स्वार्थ पनि थियो । त्यो स्वार्थ राष्ट्रियताको थियो । ‘हिमाल पाहाडबीच विभेदका नाममा झगडाको विऊ रोप्ने तयारी भएका बेला एकताको सन्देश दिन पनि महोत्तरी पुगेको हुँ । ’ धुर्मुसले प्रष्टिकरण दिए । मुसहरवस्तिमा उनी पुग्दा सितलहर चलिरहेको थियोरे । भन्छन् ‘त्यो सितलहरमा एउटा ओड्नेसम्म नभएर नाङ्गै भेटिएका मुसहरलाई देखेर भक्कानीएर रोए पनि । देशको एउटा हिस्सा भएर पनि देशको हिस्सा नै नभएजस्तो ।’ भूकम्पले थिलथिलो भएकालेलाई अलिअलि मलहम लगाएका धुर्मुस नेपालीलाई नेपालीसंग जोड्ने पुल पनि बन्न खोजिरहेका छन् ।
धुर्मुस सुन्तलीले वस्ति निर्माणलाई मात्र अघि बढाएका छैनन् मुसहरवस्तिका बालबालिकालाई कखरा सिक्न विद्यालय सम्म पु¥याउने काम गरेका छन् । भविष्यलाई जोगाउन उनीहरु मुसहरवस्ति पुगेका छन् । बैशाख १ गते वस्ति हस्तानतरण गर्ने योजना सहित अघि बढेको निर्माण कार्य अहिले ३० प्रतिशत सकिसकेको छ । कुल लागत ४ करोड ७८ लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अझै साढे दुई करोड रुपैंया अपुग छ भन्छन् उनी । तैपनि जोस जाँगर उत्तिकै छ ।
त्यतिबेला चै दुख्छ
हाम्रो देशको परिपाटि नै बनिसकेको छ कसैले सामाजिक काममा हात हाल्यो भन्यो त्यसले पैसा नखाईत कामनै गरेको छैन । धुर्मुसलाई पनि त्यो आरोप नलागेको होइन । ‘पैसा नै खान खोजेको भए गिरानचौरमा एक करोड भन्दा बढी नै रकम सजिलै लकाुउन सकिन्थ्यो’ उनले भने, ‘त्यसको हिसाव सबै जसले जतिबेला पनि हेर्न सक्ने अवस्थामा छ बाँकी रहेको पैसा महोत्तरी पुगेको छ । हार–गुहार गरेर यसो गछौं र त्यसो गछौं भने जुटाएको पैसाले आफ्नो दुनो सोझ्याउन लगाउनु अपराध हुने उनको बुझाई छ । ‘काम गर्न चाहेकालाई पनि अनाशब्यक हतोत्साहित गर्न खोज्दा भने दुःख लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
राजनीति नगर्ने त ?
मनले कलाकारीतामा पुर्यायो मनले नै समाजसेवामा डोर्यायो । तर समाजसेवापछि राजनीतिमा लाग्ने योजना भने मनले बनाएको छैन । ‘म राजनीतिक गर्न जन्मिएको होइन, कलाकारीतामा आउने नै छ’ समाजिक अभियानमा पनि सँगै रहेनछ’ उनले भने, ‘राजनीतिमा आउने विषयमा सोचेको पनि छैन । ’
दुःखको थुप्रोबाट सफलताको सगरमाथातिर
सोलुखुम्वुको विकट निचावेदघारीबाट अध्ययनको सिलशिलामा २०५८ सालमा राजधानी छिरेका सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’लाई कहिल्यै यो उचाईमा आई पुग्छन् भनेर लागेकै थिएन । निम्न आयस्तर भएको परिवारमा हुर्किएका ‘धुर्मुस’ले बाल्यकालदेखि नै आर्थिक अभाव भोगे । कापी कलमको जोहो गर्न पनि निमेक गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उच्च शिक्षा पढ्न बुवाले ऋण गरेर जुटाएको १७ सय रुपैँया गोजीमा राखेर काठमाडौं छिरेका उनलाई सपनाको शहर राजधानीले निकै दुःख दिएको थियो ।
चित्र बनाउने, भाँडा बेच्न, क्यारीकेचर गरेर हँसाउँदै थुप्रै छाक टारेँको अहिले पनि उनको मनमा ताजै छ । राजधानीले नै उनलाई ललितपुरकी कुन्जना घिमिरे ‘सुन्तली’सँग भेट गराएको हो । त्यही भेटपछि जीवन जीउने साथ र आधार बन्यो । अबको यात्रा उनी ‘धुर्मुस सुन्तली’ फाण्डेसनबाट समाजिक बाटोमा हिडाउने योजनामा छन् । भन्छन् ‘मनमा एउटै लालशा छ त्यो हो सधै अरुको सेवामा समर्पित भएर वाच्ने । कलाकारिताको पाटो र समाजसेवाको बाटो सधैँ एकसाथ अघि बढाउने छु । ’
1901 पटक पढिएको
कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने पात्रहरूले ६० दिनभ...
काठमाडौँ । कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाउने कि सरक...
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुव...
काठमाडौँ । संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकार एक दल...